एक सातामै भत्कियो सडक » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एक सातामै भत्कियो सडक
बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १०:१५ मा प्रकाशित !
कञ्चनपुर, ६ बैशाख । बेल्डाँडी गाउँपालिकामा बन्न लागेको कालोपत्रे सडक हप्तादिन नवित्दै भत्किन थालेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरबाही र गुणस्तरहीन काम गर्दा कालोपत्रे गरेको हप्तादिनमै सडक भत्किन थालेको हो।
बेल्डाँडी ग्रामीण क्षेत्र भएकोले निर्माण कार्यमा लापरबाही गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । कालोपत्रे भएको सडकमा साइकलको स्टेण्ड गर्ने बित्तिकै साइकल त्यही गाभिने गरेको बेल्डाँडीका स्थानीय सन्देश पाण्डेले बताए । उनका अनुसार निर्माणका लापरबाही हुँदा कालोपत्रे हप्तादिनमै भत्किएको छ।
गाउँको विकासका लागि ल्याएको बजेट कर्मचारी, ठेकेदारलगायत मिलेर अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय युवा यज्ञ भट्ट, जयसिंह कुँवर, धर्मराज जोशी लगायतले कालोपत्रे गरेको हप्तादिनमै सडक भत्कन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
बेल्डाँडी गाउँपालिकाले आफूसँग इन्जिनियर नभएकाले बेदकोटबाट इन्जिनियर मगाएर काम गरेको थियो । बेदकोट नगरपालिकाबाट आएका इन्जिनियर अतिश शाहीले स्थानीयले दावी गरेजस्तो गुणस्तरहीन काम नभएको दावी गरे । तर गर्मी मौसम भएकाले सेट हुन केही समय लाग्ने उनले बताए।
बेल्डाँडी गाउँपालिकाका अधिकृत धर्मराज जोशीले आफूलाई कालोपत्रेको बारेमा थाहा नभएको र सडक भत्किएको देख्दा आफूलाई पनि नराम्रो लागेको बताए।
कार्यकारी अधिकृत जोशीले ठेकेदारलाई सोधपुछ गरेर काम गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिने बताए । बेल्डाँडी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बेल्डाँडी बजारदेखि गाउँपालिका कार्यालयसम्म झण्डै एक हजार मिटर सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ । स्थानीयले कालोपत्रे भएको सडक अनुगमन गरेर पुनः सुधारका लागि माग समेत गरेका छन्।
PREVIOUS POST Previous post: मनपरी शुल्क लिने विद्यालयलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्छु
NEXT POST Next post: प्रचण्ड सरकारप्रति किन आक्रोशित भए विप्लव
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १०:१५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १०:१५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १०:१५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १०:१५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १०:१५